Vaovao - dingana kely Fahasamihafana lehibe- Birao Bio
Fomban-drazana PE fanodinana
一 ： Fomba fanodinana fitaovana ara-javakanto
3. fanodinana vola
5.melting sy pelletizing
1. Ny ampahany kely amin'ny plastika sisa dia azo ampiasaina indray na ampiasaina indray.
2. Ny fanodinam-bola mahomby sy mahomby amin'ny fantsona plastika mifangaro no angamba fanamby lehibe indrindra atrehin'ny indostrian'ny fanodinana.
： Akora matevina
Ny biodegradability dia tsy miankina amin'ny akora, fa miankina tanteraka amin'ny firafitry ny polymer an'ny polymer.
四 ： Fandotoana / Biodegradable
1 ：Biodegradable dia tafiditra ho iray amin'ireo fomba amin'ny composting.
2 ： Ny karbaona azo ovaina biodegradable ao anatin'ilay lohahevitra aorian'ny lanin'ny microorganism dia navotsotra tanteraka tao anaty faribolana ny karbaona
五 ： Drafitra compost Bio / PLA NUAP
Certificate ： taratasy fanamarinana ananantsika